Fidinana mikasika ny fandriampahalemana tany amin'ny Faritra | Primature
Mahazoarivo, ny 11 jolay 2019 – Ao anatin’ny fampiharana ny politika ankapoben’ny fanjakana hatrany dia nitarika delegasiona nitsidika an’i Tsaratanàna, Mandritsara, Andilamena, ary Besalampy, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, omaly.
Ny fanohizana ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra no vontoatin’izao dia izao, mba hamerenana indray ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana. Nambaran’ny Praiminisitra ary fa ny fijerena ifotony an-kalamanjana no ahafahan’ny governemanta manao kisary ny tetik’ady vaovao hampiasaina hanoherana amin’ny fomba maharitra ny asan-jiolahy, mba tsy hiononana fotsiny amin’ny filatsahana an-kamehana rehefa misy endrika tsy fandriampahalemana miseho. Tsapa hoy ny Praiminisitra fa na manao ny ainy tsy ho zavatra aza ireo mpitandro ny filaminana, ao anatin’izany ireo miaramila, zandrary, ary polisy, dia efa ela loatra no niaina tao anatin’ny tebiteby, ny ahiahy, ny tsy fahamarinana, ny fijaliana sy ny fahoriana maro samihafa, ary vesarin’ny fahantrana ny vahoaka Malagasy ka toa zary very fanahy mbola velona, ary indrindra, hoy izy, mazava fa tsy ny vahiny no manapotika ny firenena fa ny samy Malagasy ihany, midika izany fa tsy misy ny hambom-po amin’ny fitiavan-tanindrazana.
Nohazavain’ny Praiminisitra fa nanao fianianana velirano tamin’ny vahoaka ny Filohan’ny Repoblika ka ankehitriny dia mitondra vahaolana hamerenana haingana dia haingana ny fandriampahalemana ny fitondram-panjakana, mba hidirantsika amin’ny fanandratana an’i Madagasikara ka ny zava-dehibe voalohany amin’izany dia ny fampanjakana ny fahamarinana, izay tanterahina amin’ny alalan’ny fandraisana andraikitra ho an’ireo mahatsapa ho voafidy sy ireo olom-boatendry. Notsipihiny fa tsy azo ekena intsony ny tsy famendrehana nandritra ny taona maro hita teo amin’ireo tompon’andraikitry ny Faritra sy ny lafin-tany satria amin’ny alalan’ireny tompon’andraikitra mipariaka ireny no itarafan’ny vahoaka ny lanjan’ny fanjakana. Noraisiny ho ohatra amin’izany tsy fahamendrehana izany ny fahasahian’ireo tompon’andraikitra sasany mivarotra an-tsokosoko ny tanin’ny Distrika na tanim-panjakana hafa, izay tena manaporofo fa tsy misy ny fiarovana ny tombontsoan’ny fanjakana ary tsy voahaja ny tany tan-dalàna. Nampitandrina ny Praiminisitra fa haniraka mpanao fanadihadiana ka raha toa tsy mandeha amin’ny tokony ho izy ny fitantana ny fananam-panjakana dia hiditra am-ponja ireo izay nahatonga izany. Inoako, hoy ny Praiminisitra fa olon-kendry sy manam-panahy ny tompon’andraiki-panjakana rehetra ka manomboka izao dia hampijoro ny tena fahamarinana amin’izay asa rehetra sahanina.
Momba ny resaka fahamarinana ihany dia nanambara ny Praiminisitra fa anisan’ny tsy maha-tomombana ny fifampitokisana ihany koa ny goragora na ny tandrevaka eny anivon’ny fitsarana : indraindray hoy izy dia misy ny tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy, ary raha mahatandrina ny asany ireo tompon’andraikitra ambony dia tokony hanara-maso ny fomba fiasan’ireo olona feheziny. Ny fitsarana, hoy ny Praiminisitra, dia mamoaka didy amin’ny anaran’ny vahoaka Malagasy, ka raha tsy mipetraka ny fandraisana andraikitra amin’ny fahamarianana dia hahazo vahana ireo olon-dratsy, eny, faty olona, fametavetana vehivavy, fandorana fananan’olona, alahelo no ao vokatr’izany. Hentitra ny Praiminisitra nilaza fa tsy tokony hisy intsony ny fiarovana olon-dratsy.
Mikasika ny halatr’omby manokana dia nitondra teny fampieritreretana ho an’ny tsirairay ny Praiminisitra raha nilaza fa maro ireo Malagasy mpiray tanindrazana no lasa mahantra na sahirana, nohon’ny fahaverezan’ny omby ateraky ny asan-dahalo. Nomarihiny fa anjaran’ireo lehiben’ny Distrika sy delegem-panjakana no manara-maso sy manamarina ny taratasin’omby, ary tokony ho sahy hijory hitoroka an’ireo mpanao asa ratsy ny vahoaka. Nomarihiny ihany koa fa misy tambazotra lehibe lasa milina mampirongatra ny halatr’omby ka tokony hiara-mientana ny tsirairay hanatratra ny olona ao ambadik’izany. Nohanteriny fa ny fahamarinana ihany no lalana mahomby ahafahana manarina ny firenena sy manova ny tantarany.
Nanambara ny Praiministra nandritra ny fitsidihana tao Mandritsara fa efa miha-voafehy ny fitrandrahana lavanila saingy mahazo vahana ny halatr’omby. Nomarihiny fa sady avoaka amin’ny atsimo no andrefan’ny Distrika ny omby nangalarina tany an-toerana. Misy borigadin’ny zandarimaria sy vondron’ny mpitandro ny filaminana anefa, hoy izy, amin’ny Faritra Alaotra Mangoro, saingy tsapa fa misy misy mpitandro filaminana mitady hanodikondina ny ombin’ny vahoaka izay efa mijaly: “tsy azo leferina izany toe-javatra izany”, hoy ihany izy.
Tao Tsaratanàna kosa dia nilaza ny Praiministra fa efa nahazoana vokany ny ezaka nataon’ireo mpitandro ny filaminana, ka nihena ny fakana an-keriny, ny famonoan’olona, ny tsy fifampitokisana teo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana, na dia mbola misy tranga vitsivitsy indraindray aza. Tsy maintsy mbola hisy ezaka vaovao hatao hoy izy, ary hodinihina tsirairay ny toerana hanamafisana ny fiarovana sy ny vokatra mety ho azo amin’ny fepetra raisina amin’izany toerana izany.
Nanolotra fisaorana ho an’ireo mpitandro ny filaminana izay mandray anjara amin’ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra ny Praminisitra, nandritra ny fitsidihana rehetra nataony.
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat, le Premier ministre, Chrisitan Ntsay, à la tête d’une délégation, a visité hier, les villes de Tsaratanàna, Mandritsara, Andilamena, et de Besalampy.
← Visite d’une station de distribution d’eau en construction
Descente du Premier ministre à Moramanga →